Ny Antsaly dia tarika maneho ny hira nentin-drazana tao amin
ⓘ Ny Antsaly dia tarika maneho ny hira nentin-drazana tao aminny faritra afovoani Madagasikara. Ny vohikalany: Ny Antsaly dia tarika naneho ny hira nentin-drazana ..
ⓘ Ny Antsaly
Ny Antsaly dia tarika maneho ny hira nentin-drazana tao aminny faritra afovoani Madagasikara.
Ny Antsaly dia tarika naneho ny hira nentin-drazana tao aminny faritra afovoani Madagasikara. Tsy latsa-danja koa anefa ireo tarika toy ny Kambana mirahalahy na koa ireo kingalahy aminny valiha tao Imerina sy tao aminny faritany Betsileo. Saingy, raha maro ny tarika mpihira taminny taonjato faha 20, ireo izay voalaza taty ahoriana fa naneho ny vakoka, no nandray kely taminny bà-kira vahiny nalaza tao aorianny ady lehibe faharoa, ny tarika Ny Antsaly dia nikiry nampiseho ny tena naha izy azy taminny bà-kirany sy ny tononkirany. Ny angola-teniny dia nolovainy taminny fomba fiteninny Ntaolo, ireo razana. Tsy izany ihany fa ny tarika Ny Antsaly dia nanenika firenena maro nampahafantatra ny sanganasany. Noho izany dia rariny izy raha apetraka am-piandrianana ho anisanny tarika Malagasy nahay indrindra. Satria koa zava-dehibe ho anny tanora mpanao zavakanto ankehitriny, na koa ireo izay mpankafia hira fotsiny ihany, ny mahafantatra, mandinika ary mihaino ny hirany mba hakany aingam-panahy. Ny tarika Ny Antsaly dia tena anivonny vakodrazana Malagasy. Ireo sanganasany dia manana toerana avo ao aminny tadidy iombonanny Malagasy.
Manimanina, Mokatejy, Biazavola, Afindrafindrao. Santionany aminireo hira sy angola novolavolain-dry RANDAFISON Rémi, RANDAFISON Benjamin Sylvestre, RAZAFINDRAKOTO Bernard ireny. Nangolainizy ireo taminny fampiarahana ny "Guitare" sy ny valiha ary tena manasongadina ny mozika Malagasy sy ny "Bà Gasy".
Wikipedia: Ny Antsaly